Wararka - Waa maxay Polyvinyl Chloride (PVC), maxaase loo adeegsadaa?
Polyvinyl Chloride (PVC) waa mid ka mid ah polymers-ka aadka loo isticmaalo thermoplastic-ka adduunka (waxaa ku xiga kaliya caagag aad u badan oo aad loo isticmaalo sida PET iyo PP). Waa dabiici dabiici ah oo aad u jajaban (ka hor inta aan lagu darin caagaga) balaastik. PVC wuxuu ka dhawaa dheeraa balaastikada badankood markii ugu horeysey ee la soosaaray 1872 isla markaana ganacsi ahaan ay soo saartay BF Goodrich Company 1920s. Marka la barbardhigo, balaastikado kale oo badan oo caan ah ayaa markii ugu horreysay la soosaaray waxayna noqdeen kuwa ganacsi ahaan u adeegsan kara oo keliya sannadihii 1940 iyo 1950-meeyadii. Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha dhismaha laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa calaamadaha, codsiyada daryeelka caafimaadka, iyo sida fiberka dharka.
PVC waxaa loo soo saaray laba nooc oo guud, marka horena waa polymer adag ama aan caag lahayn (RPVC ama uPVC), iyo tan labaad oo ah caag jilicsan. Dabacsan, balaastigga ama PVC-ga caadiga ah ayaa ka jilicsan uguna macquulsan in la laalo marka loo eego uPVC sababo la xiriira in lagu daro bacrimiyayaal sida phthalates (tusaale ahaan diisononyl phthalate ama DINP). PVC debecsan waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismaha sida dahaarka fiilooyinka korantada ama sagxadda guryaha, isbitaalada, iskuulada, iyo meelaha kale ee jawiga nadiifka ahi mudnaanta leeyahay, mararka qaarkoodna beddel caag ah.
PVC adag ayaa sidoo kale loo isticmaalaa dhismaha sidii tuubbo loogu talagalay tuubbooyinka iyo xarkaha taas oo badanaa loo yaqaan ereyga "vinyl" ee Mareykanka. Biibiile PVC waxaa badanaa loo yaqaan "jadwalka" (tusaale Jadwalka 40 ama Jadwalka 80). Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya jadwalka waxaa ka mid ah waxyaabaha sida dhumucda darbiga, qiimeynta cadaadiska, iyo midabka.
Qaar ka mid ah astaamaha PVC ee astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qiimaheeda oo aad u hooseeya, iska caabbinta xaalufinta deegaanka (iyo sidoo kale kiimikooyinka iyo alkaliiska), adkaanta sare, iyo xoog-u-jiidashada adag ee caagga ah ee ku saabsan PVC adag. Si ballaaran ayaa loo heli karaa, sida caadiga ah loo isticmaalo oo si fudud dib loogu cusboonaysiin karo (oo loo kala saaray lambarka aqoonsiga "3")